enhlokweni yemphambili - a ukuqina Isigaxa emise wenduku, okuyinto iphela kuvulwa urethra. On ubuso bayo ventral yenziwe yaba yasendaweni emphethweni longitudinal, othiwa amatomu. Umdwebo lowesilisa isitho sobulili ingatholakala kwehhovisi likadokotela esithombeni. inhloko yabangamashumi hypersensitivity umthondo, njengoba imbozwe isikhumba ebucayi kakhulu. Kuyinto kule ngxenye umthondo kuyinto lenqwaba kwalapho kuhlangana khona imizwa.
Ziyini izimbangela eziyinhloko zalokhu zobuhlungu ekhanda wenduku
Ukubangela ubuhlungu ekhanda umthondo, impela eningi. Ngokuvamile, enhlokweni yemphambili libuhlungu ukuthuthukiswa izinqubo ukuvuvukala, ezishisayo, amakhemikhali, umonakalo mechanical, kwegazi ompofu. Ngokuvamile, omsakazo emizweni enjalo ephathelene ne-isizathu sokuqala.
Balanoposthitis uma iziguli esekhala sebuhlungwini obunzima endaweni obuseduze. Ngokuvamile enhlokweni yemphambili hyperemia futhi edema. Balanoposthitis ngezinye izikhathi zihambisana ukuvuvukala inguinal zamanzi. Ngaphandle ukwelashwa esifike ngesikhathi lesi sifo siba ifomu granulosa elibangela ukuthuthukiswa izinqubo necrotic. Ukuze ukwelashwa zokugeza aqoke khona ejenti isinqandakuvunda ngokuthi "Furatsilinom", permanganic acid, itiye camomile. Ngokwelashwa okufanele ka ubuhlungu nokuvuvukala zinyamalale zingakapheli izinsuku 5-7. Kwezinye izimo, impatho kuhlinzwa.
Izifo ezithathelwanayo ukuthi kumkhathaze ubuhlungu ekhanda umthondo
Izifo ezivame kakhulu, esithathelwana ngobulili chlamydia, urogenital herpes, isipatsholo, ureaplasmosis, trichomoniasis. Izifo ngenhla ahambisana ubuhlungu, ububomvu, futhi ukulunywa we glans. Phezu ukuthola izimpawu ezinjalo kudingeka ukubona onguchwepheshe. Ukuze uphethwe ukuqhuba oluphelele ukuhlaziya laboratory. Ukuze nokwelashwa kweziguli iqondiswa yokwelapha elwa namagciwane kanye elwa namagciwane.
Izifo ezingathathelwana ezibangela ubuhlungu umthondo
Ubuhlungu ikhanda zingahlanganiswa ukuvuvukala urethra. Wathi sifo sibangelwa nezilwanyana ezincane ze-non-ethize noma zokugula kwenzeka uma ezithathelwana ngobulili. Ngobuhlungu acute ngaphakathi ikhanda kukhona "abukhali" uhlamvu, urethritis ezingamahlalakhona mancane evelele.
Ngokuvamile etiology zobuhlungu ekhanda wenduku lihlotshaniswa kahle kwegazi emzimbeni. Kukhona ezihlukahlukene omkhulu izifo (isifo sikashukela, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, lwemithambo occlusive isifo) lapho enyakaziswa ukugeleza kwegazi e-capillary. Njengoba sinazo zonke lezi izifo izinguquko sokugembula e imithambo yegazi zikhula kancane. Ngakho-ke, ubuhlungu enhlokweni yemphambili abe ngiyaqaqanjelwa njalo ngokwemvelo.
Uma sikhuluma ubuhlungu endaweni obuseduze, awukwazi bayakhohlwa ukuvaleka ijwabu. Nge ukuthuthukiswa kwalesi sifo ngo prepuce ndaba ezimhlophe aqoqana - smegma, okuyinto enhle kakhulu izakhi naphakathi kwezilwanyana ezincane. Phimosis, balanoposthitis eziyinkimbinkimbi, ephelezelwa ubuhlungu, ububomvu, futhi ukulunywa we glans. Uma enhlokweni yemphambili akawuvuli, yini okufanele uyenze? Iningi ochwepheshe uthanda ukuhlinzwa.
Imbewu yefilakisi. Isicelo izifo ezihlukahlukene
Kuthiwani uma i-asidi lenyuka?
Kuthiwani uma ilanga obgorite: Amathiphu Olungokoqobo
Indlela yokufaka isicelo suppositories rectal?
Hemocorrection Extracorporeal: incazelo inqubo, izici kanye nokubuyekeza
Phezulu encwadini iphupho. Seziqa - lokho uyaphupha?
Landscaping. Ingadi ngezandla zakhe ukuze icebo encane
Kiev ongaphansi komhlaba: isikimu kanye imodi esebenzayo
Umamukeli we-GS 8304: i-firmware, isibuyekezo sesofthiwe nokusetha
Mkhathi. Artificial Earth satellite
Ubuhle exotic sumac. Izinkuni-spice
Indwangu Pink - umhlobiso yasekuqaleni ekhaya lokubhalela
Greece: amaholide nezingane. Lapho kangcono uphumule? Ezokungcebeleka namahhotela e Greece